Hawu, awamasonto ambalwa! Uma uqaphele ukuthi bengingabhali kaningi, kungenxa yokuthi ngithathe uhambo olulodwa ngaya kulo UDell EMC Umhlaba lapho mina noMark Schaefer saba nelungelo lokuxoxisana nabaholi kuzo zonke izinkampani zeDell Technology zabo Izinkanyiso podcast. Ukubeka le ngqungquthela kahle, ngihambe amakhilomitha angu-4.8 ngosuku lokuqala ngalinganisela ngamamayela ama-3 nsuku zonke ngemuva… futhi lokho bekungokuphumula njalo nokuthola amakhona ukuze kwenziwe umsebenzi othile. Bengingahamba ibanga lelo kabili kepha ngiphuthelwe okuqukethwe okuhle nezethulo.
Ngenkathi ingqungquthela ibigxile kwezobuchwepheshe, kubalulekile ukuthi ochwepheshe bezokumaketha babone ukuthi yini eseza emkhathini wobuchwepheshe bolwazi. Izinkampani sezivele zithembele kubuchwepheshe cishe kuzo zonke izici zebhizinisi labo - futhi ikusasa liletha namandla okuguqula zonke ezinye izici.
Ngamanye amagama, sonke siba ubuchwepheshe izinkampani. Futhi lezo zinkampani ezenza amapulatifomu azo abe ngesimanje, ziqasha abasebenzi abafanele, futhi ziqinisekise ukuphepha ziyisisekelo zibona ukonga okwehlukile okuvula izabelomali ezethula imikhiqizo nezinsizakalo zazo. Nayi eminye yemigomo okufanele uqale ukuyiqonda futhi ucabange ukuthi bazoyishintsha kanjani inkampani yakho nokulindelwe kwamakhasimende akho kungekudala.
Kuhlangana - Ingqalasizinda ehlanganisiwe (i-CI) ihlanganisa ndawonye izici eziyinhloko zesikhungo sedatha - ikhompiyutha, isitoreji, ukuxhumana nokubonwa. Akusekho ukucushwa komuntu ngamunye, ipulatifomu ebekwe kalula ngemiphumela yokusebenza elindelekile.
Imemori Eqhubekayo - ikhompyutha yanamuhla incike kokugcina kanzima kanye nakwimemori, ngamakhompiyutha ahambisa idatha emuva naphambili. Imemori eqhubekayo iguqula ikhompyutha ngokugcina isitoreji kwimemori lapho ingabalwa khona. Amasistimu okusebenza weServer azothuthukiswa aqaphele okuphindwe kabili noma kayisishiyagalombili ijubane lamaseva ayizolo.
I-Utility Computing - uma ufaka i-outlet, awucabangi ngokufunwa, igridi, amandla, noma izipele ezidingekayo ukuqinisekisa amandla kudivayisi yakho. Lokhu kungukuqondiswa kwamadivayisi wethu weselula, ama-laptops ethu, nengqalasizinda yethu yeseva. Ngezindlela eziningi, sesivele sikhona kepha kuya ngokuya kube ngokoqobo.
Iqiniso elixubile - amandla wekhompiyutha esixoxa ngawo lapha aqhubeka nokukala ngaphezu kwanoma yini esake sayicabanga, okusenza sikwazi ukunamathisela umhlaba owengezelelwe kowangempela wethu. Ngeke kube kude kakhulu manje ngaphambi kokuba sihlanganyele nomhlaba wethu ngale kwe-iPhone noma i-Google Glasses, futhi sibe nokufaka okungashumeki okuhlanganisa umhlaba wethu wangempela nolwazi esilutholayo ukuthuthukisa yonke impilo.
Isibonelo esisodwa esachazwa ukusetshenziswa kwe-IoT nezolimo lapho izinkomo zokukhiqiza ubisi zafakwa khona ngamadivayisi aqapha ukudla nokudla kwawo ukuze kuthuthukiswe ukujiya okudingekayo ekukhiqizeni ushizi. Leli yizinga lokuqamba kanye nokusebenza kahle esixoxa ngakho nobuchwepheshe. Hewu!
Ukudalulwa: Ngakhokhelwa nguDell ukuba ngiye eDell EMC World futhi ngisebenze kuma-Luminaries podcasts. Kodwa-ke, azange basize ukubhala lokhu okuthunyelwe ngakho-ke kungasho ukuthi izincazelo zami zicishiwe kancane. Ngiyabuthanda ubuchwepheshe, kepha akusho ukuthi ngisho ngiziqonda kahle zonke izici zabo!